नेपाल स्वयंमा अविरल उर्जा हो | Ratopati
नेपाल स्वयंमा अविरल उर्जा हो
personमुक्तिबन्धुaccess_timeNov 11, 2018 chat_bubble_outline0
नेपालको राजनीतिक, भाषिक, जनजातीय लगायत विभिन्न फाँटको स्थितिबोध एवम् सांस्कृतिक अभियानका क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै इतिहास निर्माण गर्न सफल सरल, सुबोध, लोकप्रिय नेता पद्मरत्न तुलाधरको असामयिक निधनले धेरैलाई स्तब्ध बनायो । यसपालीको भिन्तुना यात्रा नै खल्लो भयो ।
भयङ्कर आततायीहरुलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसक्ने लाचार सरकारबाट निराश जनता हामी तिहारजस्तो पूmल र बत्तीकै चाडमा पनि खुलेर हाँस्न सकेको अनुभूतिमा रहेनौं । तथापि राजधानीबासीलाई दशैंभन्दा तिहार रमाइलो लागेको पक्ष पनि देखियो । तिहारमा राष्ट्रपतिको सवारीले बाटो छेकेन । मन्दिरहरुमा असम्वैधानिक पूजा अर्चनाका तामझाम पनि देखिएनन् । राजधानीबासीहरु सडक गल्लीहरुमा निर्वाध हिँड्न पाएका देखिए ।
नेपालीकिसानले फलाएको अदुवा आफ्नो देशमा छिर्न नदिने भारतले तिहारमा नेपाललाई नचाहिँदा नचाहिँदै ट्रककाट्रक फूल बेच्न पठाएको र त्यसले नेपाली पूmलको बाटो छेकेको देखियो । सरकारले नेपालका पूmलउत्पादक किसानहरुको उत्साहरक्षाका लागि एउटा सिन्को भाँचेको भने कतै देख्न पाइएन ।
यसपालीको तिहारमा विशेषतः राजधानी शहरहरुमा द्यौसीभैलोको मौलिक प्रवाह पनि देखिएन । कतै पीडाको आर्तनाद र कतै विलास वैभवको उल्लासले सिर्जना गरेको विषमताबाट चाडबाड बोझिलो भएको अनुभूति गर्नेहरु पनि भेटिए । चाडबाढमा विभिन्न विषयमा कोठे सम्बाद त हामीकहाँ स्वभाविकै हो । आफु सम्मिलित कोठे सम्बादमध्ये एउटा सम्बादलाई मैले यहाँ यसरी टिपेको छु ।
“बिहानको समय थियो । म कार्यवस एक नेताजीकोमा पुगेको थिएँ । मेरो निधारतिर हेर्दै नेताजीले सोध्नुभयो, ‘तपाइँले किन टीका लगाएको ? तपाइँ त हाकिम भइसकेको मान्छे । आजको जमानामा निधारमा टीका छापेर हिँड्न तपाइँलाई असजिलो लाग्दैन ?’ उचित जवाफ त थियो । नेतालाई मुख फर्काउनु उचित थिएन । म हाँसे । मेरो मन हाँसेको थिएन ।” एक जना हाकिम साथीले मसँग आफ्नो मनको बह पोख्दै भन्नुभयो, “यस मुलुकमा कतिपय ठुलाबडाहरु विधर्ममैत्री बनेकाछन् । ती टीकाको रिस गर्छन् । यसै त म पनि टीकाप्रसाद होइन । विद्यार्थीकालदेखि वामपन्थी परिवेशमा हुर्केको हुँ । मुलुक अहिले धर्मनिरपेक्षतामा छ । म सरकारी जागीरमा छु । मलाई टीकाको मोह छैन । सधैँ टीका लाएर हिँड्दिनँ । त्यसदिन मन्दिरको बाटो निस्केको थिएँ । परिचित पुजारीले आदरपूर्वक टीका लाइदिन खोज्दा मैले नाइँनास्ति गरिनँ । नेताहरुको पारा सम्झेरै पनि नाइँनास्ति गरिनँ ।
मलाई यी नेताले यसरी सोध्छन् भन्ने सरदर पूर्वानुमान नै पनि थियो । तथापि त्यसरी ठाडठाडै सोधिसकेपछि मैले अपमानको अनुभूति गरेँ । मानिसको नितान्त व्यक्तिगत कुरामा नेताहरु किन चासो राख्छन् ? म सरकारी हाकिमका रुपमा कार्यालयसमयमा सरकारी समय र रकम खर्च हुने गरी कुनै धार्मिक कार्यक्रममा गएको त थिइनँ । त्यसो नगर्न म सचेत पनि छु । हाम्रा गाउँबस्तीहरुमा युरोप अमेरिकाका गोरा पर्यटक पनि पुग्छन् । ती कति त्यहाँ होमस्टे गर्छन् । गाउँमा कुनै पनि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमको अवसर परेको छ भने गाउँलेले तिनीहरुलाई पनि टीका लगाइदिन्छन् । प्रसाद खान दिन्छन्ं । तिनीहरु खुसीसाथ टीका प्रसाद ग्रहण गर्छन् । हाँसखेल नाचगान र भजनसमेतमा सहभागी बन्न पाए खुसी हुन्छन् । नेपालका नयाँ जोगीहरु भने बढी नै खरानी घस्छन् ।” साथीले धाराप्रवाह शैलीमा भन्नुभयो । म सुन्दैथिएँ । साथीले भन्नखोज्नुभएको मुख्य कुरा त अझ बाँकी नै रहेछ ।
हामी धर्मवादी थिएनौं र छैनौं पनि । हामी राज्यले धर्मनिरपेक्ष्य रहनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मानिस हौं । यहाँ त त्यो धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा राजनेताहरुमा विदेशी धर्ममैत्री आयो । धर्मराजनीतिक उद्देश्यका विदेशीहरुका लागि धर्मप्रचार गर्ने अवसरको सुलभता आयो । नेपालको साविक धर्मपरम्पराहरुमाथि सुनियोजित अतिक्रमणको अवसर आयो । चिन्ताको विषय यत्ति मात्र हो । हुन त नेपालमा आजको यो अप्रत्यासित धर्मनिरपेक्षताको सापेक्ष निहितार्थ जगजाहिर नै छ ।
टेबलमा आइपुगेको चिया घुट्क्याउँदै साथीले भन्नुभयो, “अर्का एक जना ठूला नेताका कृपामा म एक शनिबार बिहान राजधानीको एउटा ठूलोे होटलमा आयोजित प्रार्थना भोजमा सम्मिलित हुन पुगेको थिएँ । जमघटमा थुप्रै विदेशीहरु पनि थिए । हाम्रा देशका गनिएका राजनेताहरु र अन्य विभिन्न ठुलाबडाहरु पनि थिए । संयोगवस म अलि ढिलो पुगेँ । प्रार्थना कस्तो रह्यो देख्न सुन्न पाइनँ । भोजमा सवै सम्मिलित भए । कतिपयले भाषण पनि गरे । सुनेँ । मनमा धेरै कुरा खेलिरहेका थिए । म भोजमा भएर पनि भोजमा हुन सकिरहेको थिइनँ । केही भनूँ त आफु सानो मान्छे !”
“यस्ता विषायमा मैले अरु साथीहरुबाट पनि सुन्दैआएको छु ! हिजोआज नेपालमा राजनीति गर्नेहरुका लागि यो सामान्य भइसकको छ । मुलुक र जनताका लागि भने यस्ता कुरा त्यति सामान्य मात्र हुँदैनन् ” साथीको समस्याचिन्तनमा गाँसिन खोज्दै मैले भनेँ, “म तपाइँको मनोविज्ञान बुझ्छु । जागिरे बन्नुअघि तपाइँ लेखक बन्ने सपनामा हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन पत्रिकाहरुमा आलोचनात्मक लेखहरु लेख्नुहुन्थ्यो । तपाइँ धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा पनि लेख्नुहुन्थ्यो । बोल्नुहुन्थ्यो । मैले पढेको छु । सुनेको छु । बिर्सेको छैन । जागीरे बनेपछि तपाइँको लेखक व्यक्तित्व हरायो । आलोचनात्मक मानसिकता हराएको छैन । देश र समाजका बारेमा चिन्ता गर्ने बानी हराएको छैन । त्यसैले तपाइँलाई बेलाबेला चिमोट्छ ।”
मेरो कुराले आश्वस्त हुँदै साथीले भन्नुभयो, “हो, हामी धर्मवादी थिएनौं र छैनौं पनि । हामी राज्यले धर्मनिरपेक्ष्य रहनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मानिस हौं । यहाँ त त्यो धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा राजनेताहरुमा विदेशी धर्ममैत्री आयो । धर्मराजनीतिक उद्देश्यका विदेशीहरुका लागि धर्मप्रचार गर्ने अवसरको सुलभता आयो । नेपालको साविक धर्मपरम्पराहरुमाथि सुनियोजित अतिक्रमणको अवसर आयो । चिन्ताको विषय यत्ति मात्र हो । हुन त नेपालमा आजको यो अप्रत्यासित धर्मनिरपेक्षताको सापेक्ष निहितार्थ जगजाहिर नै छ । आखिर नेपाली जनताले पश्चिमाहरुको विध्वंशक आकांक्षा सफल हुन त दिँदैनन् । नेपालीलाई नेपालको मायाँ छ । सवै क्रीतदास बन्न सम्भव पनि छैन ।”
“हो, यथार्थ त सतहमा आइसकेको छ । तर पनि अहिले वातावरणले अफिम पिएको अवस्था छ । सवै निद्रामै देखिन्छन् । आवाज दिन सक्नुपर्छ । एक दिन निद्रा खुल्छ । समग्र वातावरण व्युँझन्छ । जनता ब्युँझेपछि विकृति विसङ्गतिहरु स्वतः पाखा लाग्छन् । हामीले आशावादी हुन पनि सक्नुपर्छ ।” मैले भनेँ ।
यत्तिकैमा अर्का एक जना साथी थपिनुभयो । वहाँ एक चल्तीको पत्रिकामा सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । एकछिनको भलाकुसारीपछि हामी पुनः देश र समाजको चर्चामा उक्ल्यौँ । कुरैकुराका नवागन्तुक साथीले भन्नुभयो, “गणतन्त्रपछिको सरकारले ठूलो अवसर गुमायो । ‘समयका चुका आदमी और डालका चुका बन्दर’ भन्छन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ सपना छरेर आएको गणतन्त्र जनताका उत्सुकताको शिखरमा थियो । यसैबीच ०७२को भूकम्पले नव निर्माणको स्वर्णिम अवसर प्रदान गरेको थियो । भूकम्पले सोत्तर भएका गाउँबस्ती र शहरको विनाशमय अवस्थालाई नै विकासको उर्जा बनाएर जनताको सहभागिता र सरकारको पहलमा योजनाबद्धरुपमा अनुपम नमुनाका तहमा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पुनर्निर्माण मुलुकको लागि मात्र नभएर संसारकै आँखामा उत्कृष्ट दृष्टान्त बन्न पनि सक्थ्यो । यसबाट नयाँ नेपालको सपनामा ‘चार चाँद’ लाग्थ्यो । जनतामा नयाँ व्यवस्थामाथि आस्था विश्वासको नयाँ धरहरा नै उभिन्व्थ्यो । यस बाटोमा सरकार समयमै सचेत सन्नद्ध र इमानदार हुन सकेन ।
सत्तामा सिद्धान्तनिष्ठ, स्वप्नशील र दृढइच्छाशक्तिका राजनेता निस्कन सकेनन् । सरकारको कमजोरी र अन्यमनष्कतामाथि टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गरीव नेपालीको आपत्विपत्लाई पनि धर्मप्रचारको अभूतपूर्व अवसर बनाए । उनीहरु गाउँ–गाउँमा, घर–घरमा खाद्यान्नका पोका पुन्तुरा लिएर पुगे । लत्ताकपडा र पालका बण्डल लिएर पुगे । भान्छादेखि शौचालयसम्ममका साधनसामग्री लिएर पुगे । कति घर र विद्यालयको पुनर्निमाणमा योजनावद्ध बन्दै नक्सासाथ सरिक हुन पुगे । उनीहरुले मौकामा साधनसामग्री मात्र बाँडेनन् बाइबिल पनि बाँडे । घर र स्कुलभवन मात्र बनाएनन् प्रार्थना कक्ष पनि बनाए । चर्चहरु पनि बनाए ।
यो सवै हाम्रो मुलुकका राजनेताहरुको दरिद्र मानसिकताको परिणाम थियो । नेताहरुको दरिद्र मानसिकता नै देश र जनताको दुर्भाग्य हुन पुग्यो । नेताहरुमा सकारात्मक चेतना, इच्छाशक्ति र इमान भइदिएको भए भूकम्पको विनाशलाई चौतर्फी विकासमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो । देश र जनताको सौभाग्यमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो । मुलुकमा पश्चिमाहरुको धार्मिक सांस्कृतिक आक्रमण अतिक्रमण पनि यतिसम्म हुन सक्ने थिएन । नेपालको प्रतिभा र श्रमको भयङ्कर पलायन पनि रोकिन्थ्यो । मुलुकले साँच्चिकै अग्रगति पाउँथ्यो ।
गरीब जनतामा पुगेर तिनीहरुका दुःखकाबीच घुलमिल हुन पाउनुलाई विदेशी धर्मप्रचारकहरुले महत्वपूर्ण अवसर बनाए । जनताको भयङ्कर अनिकालका बीच तिनीहरुले क्रिश्चियन धर्मको भकारी बसाए । यसलाई नेपालका एकथिरी राजनेतृत्वले आफ्नो सनातन नपुंसक अर्धमुदित नयनले टुलुटुलु हे¥यो । तिनका कति निर्लज्ज स्थानीय उपनेता तथा कार्यकर्ताहरुले आइएनजीओका कार्यकर्तासँगै साइटमा पुगेर जनताका अगाडि यो सबै हाम्रै पहलमा भएको हो भन्न पनि भ्याए । कतिपय निर्माण सामग्री हत्याउन पनि भ्याए । अर्को एकथरी राजनेतृत्व एनजीओ मानसिकताले स्वयम् वसीभूत थियो । त्यसले यसको दूरगामी परिणमतिर ध्यान दिनै भ्याएन । अर्को एकथरी राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नै मनोरथपूर्तिको सामियाना उपस्थित भएजस्तो लाग्यो । रमाइलो लाग्यो । विदेशी धर्म र त्यसका आडमा गरिन सकिने विदेशी षड्यन्त्रका विद्रूप सम्भावनाहरु कसैको चिन्तन र चिन्ताको विषय बनेन ।
विभिन्न पार्टीको आवरणमा उत्रेका अनेकौं जाली फटाहा र ठगहरुले देशविदेशबाट भूकम्पपीडितका नाममा जुटेका चन्दा रकम र सामग्रीहरुमा खुलेआम लामोहात गरे । जनतामा पुग्न नपाई बीचबाटोबाटै साधन सामग्री आफ्नो गोदाममा पु¥याए । भूकम्पपीडितका नाममा आएका जस्ताका ट्रकहरु समेत आफ्नो निजी ढोकातिर छिराएर खुलेआम लामोहात गर्ने गराउने मन्त्री र तिनका मतियारहरु पनि भेटिए । घटनाविवरणहरु मिडियामा आए । सरकारका सवै प्रशासनहरु मौन दर्शक बनेर जात्रा हेरिरहे । यो सवै हाम्रो मुलुकका राजनेताहरुको दरिद्र मानसिकताको परिणाम थियो । नेताहरुको दरिद्र मानसिकता नै देश र जनताको दुर्भाग्य हुन पुग्यो । नेताहरुमा सकारात्मक चेतना, इच्छाशक्ति र इमान भइदिएको भए भूकम्पको विनाशलाई चौतर्फी विकासमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो । देश र जनताको सौभाग्यमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो । मुलुकमा पश्चिमाहरुको धार्मिक सांस्कृतिक आक्रमण अतिक्रमण पनि यतिसम्म हुन सक्ने थिएन । नेपालको प्रतिभा र श्रमको भयङ्कर पलायन पनि रोकिन्थ्यो । मुलुकले साँच्चिकै अग्रगति पाउँथ्यो ।”
सम्पादक साथीको धाराप्रवाहले वहाँको चिया सेलाए पनि कोठाको वातावरण तातेको अनुभूति भयो । मलाई लाग्यो, ‘देश मरेको छैन । मर्दैन । नेपाली जनता कहिल्यै हारथाक मान्ने जनता होइन । हामी बोल्दैछौं त हामी सशक्त नै छौं । देशलाई सकारात्मक परिवर्तन दिन सक्ने उर्जा हामीसँग अझै पर्याप्त बाँकी नै छ । शारीरिक रुपमा पलायन बेहोर्न परेर विदेशकको चाकरीमा खट्दा पनि नेपालीहरुको नेपालसँगको सपना मरेको छैन । शरीर जहाँ भए पनि मन र सपनाका तहमा नेपालीहरु नेपालमै छन् । तिनीहरु पनि कुनै दिन सशरीर नेपालमा हुनेछन् । संसारभरिबाट दुःखले कमाएको ज्ञान, सिप र अनुभव सवै आफ्नो मातृभूमि नेपालमै खर्च गरिरहेका हुनेछन् । तिनका जरा नेपालमै छ । मुनाहरु नेपालमै छन् । ती मात्र विदेशमा भइरहन कसरी सक्छन् ?’
“तपाइँ कता हराउनुभयो ?” सम्पादक साथीले सोध्नुभएपछि म झल्याँस्स भएँ । भनेँ, “बर्तमानमा उकुसमुकुस भएपछि पुग्ने भनेको भविष्यमै न हो । म भविष्यतिर पुगेको थिएँ । मेरो भविष्यबोधले भन्छ, — आजको प्रदूषण बढारिन सक्छ । राजनीति र संस्कृतिका आजका मृतनदीहरु भोलि जीवित र प्रवाहमय हुन सक्छन् । आज नेपाल चपाउन तिखारिएका विदेशी दाँतहरु दाह्रा किट्दाकिट्दै भोलि भाँचिन सक्छन् । निकटभविष्यमा नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिन र विकसित हुन सक्छ । नेपाल जरीबुटीको देश हो । बोधिसत्वको देश हो । नेपाल प्रतिभा र प्रज्ञाको देश हो । नेपाल हिमालयको देश हो । स्थितप्रज्ञ ऋषिमुनिहरुको देश हो । क्रान्तिचेता नेताहरुको देश हो नेपाल । स्वर्णपुष्पा भूमि, सदानीरा नदीहरु र अथक मेहनती जनताको देश हो । नेपाल स्वयम्मा अविरल उर्जा हो । असीम उर्जासम्भावनाको बीचमा संयोगवस बनिन आएका आजका मुट्ठीभर राजनेताहरु र रुग्ण, जर्जर राज्यव्यवस्था नै नेपालको इतिश्री होइन ।”